Ma runbaa Soomaalidu wax Akhrika iyo wax Qorista ma Jecla? – Xeernews24
31. Juli 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
Waa su’aal in badan ay dadku iswaydiyaan ,runtii marka aad u dhabbo gashana waxa aad oganaysaa in ay tahay wax jira oo aan la dafiri karin ,waayo hadii wax akhriskeena iyo wax qoristenu badan lahayd heerkan maynaan joogneen.
Dhammaan dadka u kuur gala cilmiga bulshadu waxay isku raacsan yihiin in umad kasta garashadeedu ay ku dhisan tahay hadba inta ay aqoonteedu le’egtahay ,umad kasta oo aqoon yahan keedu badan yahayna waxaa lagu gartaa waxa bata dadkeeda wax akhrista kuwaaso marka danbana iyagu wax qora.
Khasab mahan in qofkasata oo wax qorayaa in uu ka hadlo mawduuc u bahan in wakhti badan lagu bixiyo ,balse waxa kaliya oo xataa aad qori kartaa adoo ka hadlaya tusale ahaan ,Geedka Galoolka ah iyo fa’idada uu dad iyo duunyaba u leeyahay.
Hadaad maanta oo kaliya inta aad Suuqa u baxdo aad u fiirsato bulshada iyo qaabka ay u wada macamilayso waxa laga yabaa in gurigagi aad kusoo noqoto adoo soo fa’iiday sheekoyin aad u fara badan oo hadii si xigmadleh loo qoro bulshada kalin wayn u biixinaya.
Aan idin xasuusiyo sida yar ee ay sheeko ku abuurmi karto amma ay u noqopn karto mid dadka losoo gudbiyo,iyada oo laga dheehan karo ujeedada ay gudbinaysaa fa’idad ay leedahay .
Waan ogahay in aanu hawl yarayn in wax la qoro ,waayo wax qoristu waxa ay kaga bahan tahay in aad hesho wakhti ka badan kan ay haystaan dadka aan waxba qorin,ninka qoraaga ahi waa hal abuur doonaya in uu dadka u gudbiyo waxyabaha uu isleeyahay waxbay ka fa’iidayaan.
Waxaa jira in bulshadeena dad badan oo kamidii ay qaadka cunaan,waxa ay ila tahay iyaga laftoodu hadii ay heli lahayeen bugaag ku qoran afka somaliga in ay uga fa’idaysan lahayeen inta ay fadhiga qaadka ku jiraan in ay akhrisan lahyeen,lagana yaabo in waxyabaha ay akhrisanayaan ee fa’idada lehi ay marka danbe ka horjoogsadaan cunista iyo wakhti lumiska qaadka.
Haddaba su’aasha iswadiinta lihi wax ay tahay ,hadiiba hadadan lafteeda ay jiraan dad amma dhalinyaro fara kutirisa oo jecel in ay wax akhriyaan ,halkee ayay ka helayaan goobaha wax lagu akhristo cilmigana lagu kadiyo sida Maktabadaha iwm.
Waa su’aal meesha ku jirta ,jawaabteeduna ay adkaan karto sababta oo ah ma jiraan amma hadiiba ay jiraan waa wax kooban oo aan dadka ku filayn,inta badan anigu waxa aan ka hadlayaa waxa ay tahay in la helo Kutub amma Bugaag ku qoran afkeena Somaliga ,taasina waxa ay ilatahay in aanay jirin amma ay yartahay.
Taliyaha ciidamada Militaryga Djibouti iyo qaar ka mid wasiirada madaxweyne... Colaad laga cabsi qabo in ay ka dhacdo degmooyinki lagu sheegi jirey in ay laalan...